Tag: aka mgbasa ozi mmekọrịta | Martech Zone
Tag: aka mgbasa ozi mmekọrịta
Tọzdee, Disemba 15, 2020 Tọzdee, Disemba 15, 2020 Douglas Karr
N’izu a, onye ahịa anyị na-ajụ maka ya na-ajụ ihe kpatara ọdịnaya ha ji arụ ọrụ ike na-adịghị ka ọ na-eweta ọdịiche. Onye ahịa a arụghị ọrụ iji zụlite ndị na-eso ha na mgbasa ozi mmekọrịta, kama itinye ọtụtụ n'ime mgbalị ha n'ahịa na-apụ apụ. Anyị nyere ha foto nke ọnụ ọgụgụ ndị na-ege ha ntị na mgbasa ozi mmekọrịta ma e jiri ya tụnyere ndị asọmpi ha - ma nyezie mmetụta ọ nwere na otu
Etu esi eme ka ndi mmadu mekorita ndi mmadu
Wednesday, April 18, 2018 Satọde, Febụwarị 13, 2021 Douglas Karr
N'oge na-adịbeghị anya anyị kesara ozi na edemede nke kọwara usoro asatọ iji malite usoro mgbasa ozi gị. Otutu n’ime unu amalitela usoro mgbasa ozi gi ma enweghi ike ihu oru dika ichoro anya. Offọdụ n'ime nke ahụ nwere ike ịbụ nzacha algọridim n'ime nyiwe. Dịka ọmụmaatụ Facebook, ọ ga - akara gị mma ịkwụ ụgwọ iji kwalite ọdịnaya gị karịa igosipụta ya onye ọ bụla na-agbaso ụdị gị. Ihe niile na-amalite, n'ezie,
A Social Media Marketing Atụmatụ na usoro 6 dị mfe
Fraịde, Septemba 1, 2017 Thursday, August 31, 2017 Douglas Karr
Mgbasa mgbasa ozi na-aga n'ihu na-aga n'ihu dị ka ịkparịta ụka n',ntanet, ige ntị, mbipụta, nkwado, na nkwalite maka ngwá ọrụ. Mgbasa mgbasa ozi ọha na eze na-aga n'ihu, na-enyekwu ụzọ na ebumnuche dị elu nke na-ebelata ọnụahịa ọ bụla. A na-ehiwe nyiwe maka ige ntị, ịzaghachi, mbipụta, mmụba, na ime mkpọsa ma na-aga n'ihu na-enye nnukwu onyinye maka azụmaahịa. Site na ọtụtụ nyiwe mgbasa ozi mmekọrịta ugbu a, ọ dị mfe inwe mgbagwoju anya ma ọ bụ ejighị n'aka etu esi azụlite
Etu esi eji Hashtag mee ka mgbasa ozi gị bawanye
Wenezde, August 31, 2016 Saturday, January 14, 2017 Jesse Kwuru
39% nke azụmaahịa anaghị eso mgbasa ozi mmekọrịta ha na ọ na-eduga ohere efu. Aga m egosi gị otu esi esochi hashtags nke ọma n'oge ihe omume, yana usoro ị nwere ike iji wuo mgbasa ozi na-eru. M ga-elekwasị anya na ihe abụọ: Usoro dị mkpa ị kwesịrị ịdị njikere iji tụọ mgbe ị na-agba ọsọ mkpọsa hashtag Simplezọ aghụghọ dị mfe ị nwere ike iji mepụta ọhaneze Mmetụta Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi Dị Mkpa Ọtụtụ mkpọsa mmekọrịta ọha na eze ka emebere.